Madaxweynaha Sudan oo ka Cudur Daartay Shirka Madaxda Islaamka iyo Madaxweynaha Mareykanka
Friday May 19, 2017 - 21:48:43 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Shirka Madaxda Islaamka iyo Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka furmaya Magaalada Riyadh, waxaana lagu wadaa inuu qaato muddo 2 cisho oo kala ah 20-21 bishan May.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horaanta todobaadka soo socda booqanay dalalka Sacuudiga, Israel iyo Xarunta Vatican oo ku taalla Magaalada Rome ee dalka Italy, waa socdaalkiisii ugu horreeyay ee uu ku tago qaar ka mid ah wadamada ku yaalla gobolka Bariga Dhexe.
Ku dhowaad 50 hogaamiye oo wadamada Islaamka ayaa Shir Madaxeedka ka qeybgali doona oo ah mid ka duwan shirarkii hore loogu yiqiinnay qaban-qaabintooda Ururada Iskaashiga Islaamka iyo Jaamacadda Carabta.
Madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa ka cudur daartay maanta inuu u safro Saudi Arabia, kana qeybgalo shirkaasi, waxaana ka maqnaanshiyahiisa shirka uu ku sheegay sababo u gaar ah.
Cumar Albashiir oo Maxkamadda Caalamiga u heysato dambiyo dagaal ayaa si lama filaan ah uga baaqsaday shirkaas oo lagu waday inuu ka qeyb galo, markii boqorka Sacuudiga uu casuumaad u diray.
Wakaaladda Wararka Sudan ayaa xaqiijisay in Agaasimaha Madaxtooyada Lt. Gen. Taha Osman Al Hussein uu hogaamin doono wafdiga Dowladda Suudaan ee ka qeybgalaya shirkaasi, waxaana Xukuumadda Khartoum lagu dhaleeceeyay inay hoos u dhigtay maqaamkeeda ka qeybgalka shir madaxeedka.
15/05/2018 - 22:05:01